10/9/2012 – 19/12/2012: Waxaa buuxsamey 100 maamlmood oo ka soo wareegtey doorashadii Xasan Maxamuud, waa Saddex Bilood iyo Toban Maalmood….. Guuxa Dadweynaha : 1-Ilaah ha na Dhaafiyo midaan 2-Waa Boqol Maalmood oo ku dhamaatey Magacaabis 3-War ha loo sugu Sannad 4- Lix Bilood Gaari meyso 5- Waa Dowlad jabisey Gidaarkii 4.5-ka 6- Tii Shiikh Shariif baa Dhaantey 7-Waa Dowlada lacag yari...
Halkudheg: 100, 100days
Markahore waxaan idiinka mahadcelinaynaa habsamida aad uhogaaminaysaan siyaasadda dalka iyo dadkeena Soomaaliyeed xiligaan xaaladda adag lagujiro. Sida aan wada ognahay dalkeenu waxuukabaxay xiligii kumeelgaarka waxuuna galay xili uu caalamku utexgalin sida doowladaha caalamka kajira ookale. Haddaba waxaa muhiim ah in aad la’imaataan taxadar dheeraad ah, waxii qaldaad ahaa ee horay udhacay in aad...
Madaxweynaha DFS ayaa ka hadlay Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya wuxuuna sheegay inaysan jirin wax Caqabad ah isla markaana Kenya ay kaalin ka qaadanayso nabadeynta dadka Soomaaliyeed isagoo dhinaca kalena sheegay dhinaca maamul u sameynta Gobolada Jubbooyinka in Kenya wax shaqo ah aysan ku lahayn Gobolada Jubbooyinkana ay Xaq u leedahay in dawladda Soomaaliyeed ay go’aankeeda qaadato. Prof. Xasan...
Shir Looga Hadlay Horumarinta Degmada Dolondole ayaa ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Shir balaaran oo ay isugu yimaadeen beelaha ka soo jeeda degamada Dolondole ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho 9ka December 2012. Shirkaas oo ay soo abaabuleen xildhibaanada ka soo jeeda degmada Dolondole ayaa waxaa ka soo qeyb galay qeybaha kala gedisan ee bulshada oo ay ka mid yihiin odayaal dhaqameedka, siyaasiyiinta, wax-garadka, qurba-joogta, ganacsatada iyo dhalinyarada. Shirkaas ayaa waxaa...
Gaalkacayo: Degmada Xarfo oo ka tirsan Gobolka Mudug dhacdana dhinaca Waqooyi barri ee magaalada Gaalkacayo ayaa waxaa December 6, 2012 laga dhagax dhigay Dugsi sarre oo loo bixiyey “Dugsiga Sarre ee Suldaan Hurre” Dugsigan sarre ayaa noqonaya kii ugu horeeyey ee noociisa Degmada Xarfo laga hirgaliyo. Qabanqaabada iyo dhisida Dugsiga sarre ee Suldaan Hurre ayaa waxaa iska kaashaday Jaaliyada dibadda...
Halkudheg: suldaan, xarfo
Warsaxaafadeed ka soo baxay Golaha wasiirada Dawlada Federaalka soomaaliya ayaa sheegay “in laga bilaabo maanta aan laga ganacsan karin qalabka ciidamadda sida, Hubka noocyadiisa kala duwan, Rasaasta, Tuutaha, Booshashka iyo dhamaan qalabka ay isticmaalaan Ciidamadu.” Waxa kale oo warsaxaafadeedku xusay in golaha wasiradu ka ay ka doodeen sidii loo howl galin lahaa Maxjarka Xoolaha ee...
Iyadoo maalintii Shalay Magaalada Istanbuul uu gaaray Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo Wafdigii uu hoggaaminayay ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay Dalkaas. Sarkaal ka tirsan Qunsuliyadda Soomaalida ee Istanbuul oo ka hadlayay Booqashada Madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay Dalka Turkiga ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya shalay markii uu gaaray dalka Turkiga in halkaas si...
Gabay: DAREEN QARAN – WT. Maxamuud Axmed Cabdalla (shiine)
November 30, 2012 Email: mabdalle@gmail.com HORDHAC: Dhammaan ummadda Soomaaliyeed salaan ayaa abwaanku u dirayaa. Gabayga DAREEN QARAN wuxu ku yimi dood dhex martay abwaanka iyo nin ay saaxiibbo yihiin oo la yiraahdo Ducaale. Ducaale oo ah nin aamminsan fikradda kala qaybinta dalka, ayaa wuxu abwaanku kaga hadlayaa gabaygan. Si kasta ha ahaatee, abwaanka ayaa ducaale dareensiinaya in kala tagga iyo...